माधव नेपालले राजदरवार ह त्या काण्डको छानविन गर्न किन मानेनन्? यस्तो रहेछ कारण – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/माधव नेपालले राजदरवार ह त्या काण्डको छानविन गर्न किन मानेनन्? यस्तो रहेछ कारण
नेपालको शाहबंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लोकप्रिय राजा वीरेन्द शाहको २०५८ साल जेठ १९ गते राजदरवारभित्र घटेको अकल्पनीय घटनामा ज्यान गयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र मात्र होइन, उनको पूरै वंशनास भएको थियो ।
उक्त घट्नामा राजा वीरेन्द्र शाहसहित उनको परिवारका १० जना सदस्यको ह त्या भएको थियो जसलाई अझै पनि ‘दरबार ह त्या का ण्ड’का नामले चिनिन्छ ।
दरवार ह त्या का ण्ड को छानबिन गर्न तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय, सभामुख तारानाथ रानाभाट र तत्कालिन नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
तर लगत्तै माधव नेपाल त्यो समितिमा बस्न मानेनन् । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै २०७६ सालको गणतन्त्र दिवसमा यसको खुलासा गरेका थिए ।
माधव नेपालले त्यसताका रातोपाटीसँग भनेका थिए, ‘छानवीन आयोग बनाउने टुंगोमा पुगेपछि र त्यहाँ मेरो नाम पनि राखिएपछि मैले टाउको मात्र हल्लाएँ, विरोध गरिनँ । मैले ठानेको थिएँ, त्यसमा गिरिजाबाबु पनि रहनुहोला ।
तर पछि कांग्रेस नरहने म मात्रै रहने भएपछि म त्यसमा बस्न सहमत भइनँ । कांग्रेसको कोही नबस्ने, म मात्र बस्नुपर्ने हो भने त म फँ स्ने भइहालें नि, कांग्रेसले त जहिले पनि एमालेलाई औंला देखाइरहने भयो, यही हो, दरवारको रहस्य पत्ता लगाउन नसक्ने भनेर ।
त्यो पत्ता लाग्ने घटना नै थिएन । मान्छे म रि सकेको छ, मैले गरेको हुँ भनेर कसैले मान्नेवाला छैन । त्यसको आधारमा रिपोर्ट ल्याउँदा के हुन्छ? अतः म त्यसमा बस्न मानिनँ ।’
भाग्यले बाँचे पल
सगरमाथा पोल्ट्रीफिडले हामीलाई टाट पल्टायो ः पिडित किसानहरु
दुवै मृ’गौला’ले काम गर्न छो’डेपछि श्रीमान छोडेर गएको केहि महिनामै रोजिला’को नि’ध’न